ရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူခြင်း | အမေးများအတွက် အဖြေလွှာ
အလောင်းခိုးထုတ်သွားသည်မဟုတ်ပါလား? December 10, 2009
Filed under: ရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူခြင်း — amayaphay @ 11:02 am
အစောင့်တပ်များအားပြည့်တန်ဆာမိန်းမကအရက်မူးအောင်တိုက်ပြီး မူးပြီးအိပ်ပျော်စဉ် အလောင်းခိုးထုတ်သွားသည်မဟုတ်ပါလား?
ယေရှု၏ သင်္ချိုင်းဂူကို နိုင်ငံတော်တံဆိပ် ခပ်နှိပ်ထားပြီး အထူးတပ်ကို အစောင့်ချထားခြင်းပါ။ နိုင်ငံတော်အတွက် အရေးကြီးသော အလောင်းအခိုးခံခဲ့ရလို့ အစောင့်တပ်သားများအား အပြစ်ပေးသောသမိုင်း လုံးဝမရှိပါ၊ ယဇ်ပရောဟိတ်နှင့် အကြီး အကဲတို့က စစ်သားများကို ငွေပေးပြီး ထိုအမှုကို ဖုံးကွယ်ထားဖို့ လုပ်ကြံကြောင်း သာကျမ်းစာတွင် မှတ်တမ်းရှိ၏။ အလောင်းကို ထိုအမျိုးသမီးက ခိုးသွားသည်ဆိုလျှင် ဂူကိုပိတ်ထားသော ကျောက်တုံးက တန်နှင့်ချီပြီးလေးပါသည်။ ထိုကျောက်တုံးကို အဘယ်သူက ဖွင့်ပေး ပါသနည်း၊ ခိုးသွားသည်ဟု ဆိုလျှင်ယေရှု၏အလောင်းကို ပတ်သည့်အဝတ်ဟာ ပတ်လျက်အနေအထားအတိုင်း ပုံမပျက် ကျန်နေခဲ့သည်ဟု ဆိုခြင်းကြောင့် ကြောင်းကျိုး ညီညွတ်မှုမရှိသော မုသာများသာလျှင် ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ထက် စစ်သားများ မူးပြီး အိပ်ပျော် နေကြသည်ဟု ဆိုခြင်းကြောင့် အိပ်ပျော်နေသော သူက ပြည့်တန်ဆာမိန်းမ ခိုးသွားကြောင်း အဘယ့်ကြောင့် အတတ်ပြောနိုင် ရသနည်း။
ယေရှုဘုရား သေမြဲအတိုင်းရှိကာ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့ခြင်းမရှိဟု ဆိုပါက။ (more…)
Filed under: ရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူခြင်း — amayaphay @ 11:00 am
ယေရှု ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသည် မဟုတ်မှန်ပါ၊ သွေးလွန်ပြီး သတိလစ် နေရာမှ သတိပြန်လည်လာခြင်း မဟုတ်ပါလား?
ကျမ်းစာက ယေရှုထံသို့ရောက်၍ အသက်မရှိကြောင်းကိုမြင်လျှင် ခြေကို မချိုးဘဲ၊ စစ်သူရဲတစ်ယောက်သည် နံဖေးတော်ကို လှံနှင့်ထိုးဖေါက်၍ သွေးနှင့်ရေသည် ချက်ခြင်းထွက်လာ၏ဟု ဆိုပါသည်။ ယေရှုဘုရား သေကြောင်း သေချာရန်အတွက် ရောမစစ်သားက လှံနှင့် တို့ကြည့်ခြင်း မဟုတ်ပါ။ နံရိုးကြားကို လှံနှင့် ထိုးဖေါက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ နောက်တစ်ချက်အနေဖြင့် သွေးလွန်နေသော လူနာကို သွေးသွင်းပေးပြီး မှသာလျှင် ပြန်လည်၍ ကောင်းမွန်လာဖို့ အခြေအနေရှိပါသည်။
သေသောသူများနှင့် သေပြီးလေးရက်ရှိသူ လာဇရုအား သချိုင်းဂူမှ ပြန်ရှင် စေခဲ့သူယေရှုဘုရားသည် သူကိုယ်တိုင် သေခြင်းမှ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအကြောင်းက အဆန်းတော့မဟုတ်ပါ။ ယေရှုသက်တော်စဉ်တွင် သေသောသူတို့ကို အသုဘ လိုက်ပို့ခဲ့ခြင်း မရှိပါဘဲ မုဆိုးမကို အလုပ်အကျွေးပြုနေသောသား၏ အသုဘနှင့် လမ်းခရီးတစ်ခုတွင် ဆုံမိသောအခါ ထိုသားကိုပင် ပြန်ရှင်စေခဲ့သူ ဖြစ်ပါသည်။
လိမ်ညာခဲ့ကြခြင်း မဖြစ်နိုင်ပါ သလော?
Filed under: ရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူခြင်း — amayaphay @ 9:26 am
ယေရှုဘုရားသည် သေခြင်းမှ အမှန်တကယ်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့ခြင်း ရှိခဲ့ပါ ရဲ့လား ?
လူသည် သေပြီးဘယ်ကိုရောက်မည်ဆိုတာ သေသောအခါမှသာအတိအကျ သိနိုင်ပါမည်။ ထို့ကြောင့်အကျွတ်တရားလမ်းကို ပြညွှန်သူသည် သေခြင်းတရားကို အောင်မြင်ဖို့လိုအပ်ပါသည်။ ထိုသို့မဟုတ်ပါဘဲ လူထဲကလူပြသော တရားလမ်းသည် တိကျမှုမရှိသော စိတ်အထင်သာလျှင် ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ သိပ္ပံပညာရှင်များကလည်း ယေရှုအမှန်တကယ်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျှင် ခရစ်ယာန်ဘာသာ သည်သိပ္ပံပညာ နှင့်ကိုက်ညီမှုမရှိသလို သူ့ကို ကိုးကွယ်သူများလောက် ရှုံးနိမ့်သောသူများ လောကတွင် မရှိတော့ပြီဟု ဆိုကြပါသည်။
ကမ္ဘာကလေးစားရသောကမ္ဘာကျော်သမိုင်း ပါမောက္ခသောမတ်စ်အာနိုး နှင့်အခြားပညာရှင်များက ယေရှု၏ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း သမိုင်းဖြစ်ရပ် ကိုလေ့လာ ပြီးသောအခါ သူတို့ကဒီဖြစ်ရပ်သည် စိတ်အချရဆုံးစစ်မှန်သော သမိုင်း ဖြစ်ရပ် ဖြစ်လို့ ဤကမ္ဘာလောကမှ မည်သည့်အခါမှ ပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်မည် မဟုတ်ဟု မှတ်ချက် ချခဲ့ကြပါသည်။ လူတို့လက်မခံလည်း ထိုအမှန်တရားကတော့ ဤ ကမ္ဘာလောကမှ ဘယ်သောအခါမျှပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။